Demônôlôjia - Wikipedia
Dictionnaire Infernal, nataon' i Collin de Plancy, 1818
2 Demônôlôjia kristiana
2.1 Ao amin' ny Testamenta Vaovao
Ny teny hoe demônôlôjia dia avy amin' ny teny grika hoe δαίμων / daimōn ("andriamanitra, fahefan' andriamanitra") sy ny hoe λογία / logia ("firesahana, fandalinana, siansa).
Demônôlôjia kristiana[hanova | hanova ny fango]
"Ary nony hariva ny andro, dia nentin' ny olona tany aminy ny demoniaka maro; ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa" (Matio 8.16, Ny Baiboly).
"24Raha mivoaka amin' ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana; ary rehefa tsy mahita, dia hoy izy: Hody any an-tranoko izay nivoahako aho. 25Ary nony tonga izy, dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano. 26Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy noho izy; dia miditra ireo ka mitoetra ao; ary ny faran' izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany." (Lioka 11:24–26, Ny Baiboly).
"13Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin' i Kristy. 14Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin' ny mazava. 15Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon' ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany." (2 Kôrintiana 11.13-15, Ny Baiboly).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Demônôlôjia&oldid=1012242"
Voaova farany tamin'ny 28 Mey 2021 amin'ny 08:35 ity pejy ity.